Imwe yemawonero akawanda pane Chikuru Dunhu muPrachovské skaly ndi Hakenova vyhlídka. Yakapihwa zita rekuremekedza purofesa Haken kubva kuPorní Lochov yepedyo, uyo akatsvaga zvekuchera matongo mumabwe. Hakenova vyhlídka iri pakati pePrachovské skal nedunhu rakakura (girini) redunhu. Nekuda kwemiti yakakomberedza miti yakakura, pane chete yakaganhurirwa maonero kubva pane iwo maonero, asi ichine maonero yeKrkavčí skály neTábor. Iyo nguva yakakodzera yekushanyira tarisiro iyi saka mwaka wechirimo.